Myanmar Sub-Forum Rules And Regulations : Read Before Posting Any Thread! - Myanmar - Mi Community - Xiaomi
Alita99 | from MI 8 Lite
1693699339 | from mobile
Hello Black Shark2ဖုန်းက မြန်မာစာဖောင့်ဘယ်အချိန်အသုံးပြုလို့ရမလဲခင်ဗျ။ သိတဲ့သူတွေပြောပြပေးကြပါ။
Phoepyae | from Redmi Note 7
Thanks for Myanmar
သနျးထှနျးဦး | from Redmi 7
ကိုဆကျ‌ကွီး၊မီပရိသတျတှအေားလုံးယူနီကုဒျသုံးသငျ့ပွီခငျဗြ။ဒီပျေါမှာကအလိုအလြောကျမပွောငျးပွတော့ဇျောကနျပျေါမှာကအလိုအလြောကျမပွောငျးပွတော့ဇျောကနျ့လနျ့တှကေို ကူပွီးပွောငျးပေးဖို့က ဖဘနဲ့ မစိနျကွာကွီးပဲ။အားကိုးရမယျထငျတယျနျော။
1693672092 | from Redmi Note 7
ကြှနျတျောသတိထားမိသလောကျ မေးခှနျးလညျးမဟုတျ နညျးလမျးလညျးမဟုတျ ဘာမှမဟုတျတဲ့အကွောငျးအရာတှတေငျနကွေသလားပဲ 😁
အပျေါကအကိုပွောတာကို ထောကျခံပါတယျ။ သို့ပမေယျ့ Force လုပျသလိုဖွဈနမေယျဆိုရငျ အခြို့သူတှအေတှကျအဆငျပွပေါ့မလား။
တဈခကျြစဥျးစားမိတာကတော့ ဒီလို Forum/Community မြိုးထဲရောကျလာပွီဆိုရငျတော့ ဇျောဂြီ/ယူနီ လောကျတော့ ဟိုဘကျဒီဘကျ ပွောငျးတတျသုံးတတျနလေောကျမယျထငျတယျ။ 😁😁
Hello Myanmar Mi Fans ,Warmly welcome from Mi Community Myanamar Region Section under Other Countries Sub-forum. While you guys are having fun here in Mi Community, do remember to show your utmost respect to the fellow Mi Fans around you. We sincerely hope that this will be an online platform where everyone can have fun and feel safe as we share and learn from each other! So , I would like to pay your attention to provide an enjoyable in Mi Myanmar Community. Here is/are the RULES AND REGULATIONS you should read before posting any thread . Rules And RegulationsSearch Before Post Any ThreadGo through the sticky threads once before posting any queries usually, all the major queries has been solved by going through the sticky threads.Take few Hours from your time, and read the important threads present in Forum. Not only they will give youaminimum information, but there is alsoalot of information very helpful.Use the Edit button, instead of creating another post! Multiple posting will lead to deletion of the post, then warn and ban eventually.Please Search the Forum before posting. If you don't follow this, any repeated thread will be deleted, without any notice.Can Use English Or Unicode Or Zawgyi Font You can use English or native Myanmar language (both Myanmar Unicode or Zawgyi font as you like) on only Mi Myanmar Community Sub-Forum. This special chance is only for Myanmar Community Sub-Forum and please note don't use native Myanmar language on other Sub-forum.Else , you will getawarning or ban foraperiod of time for using myanmar laguage/Myanmar Font on other Sub-forum.No SpammingWhen replyingathread, please do not postafew replies at once. Squeeze all your thoughts in one post. This is notachatroom where you can send several messages at once. Keep the forum clean and tidy.Strictly ProhibitedStrict Action would be taken against you, if any sort of nudity and/or profanity, racism, swearing, explicit language, rudeness.It's not acceptable to post nude/poronographic images.Flamming or posting withalack of respect is not acceptable.Personal attacks, racial, political and/other religious discussions will not be tolerated.Do not use the work of others without giving credits.Please be polite to another user.Please keep this forum in peace without any fights.Don't use any disturbing word's hereSales & AdvertisementsAny form of advertising or sales is strictly prohibited. Posting links of third-party vendors reselling Xiaomi/Poco products are also considered as advertising.Sharing 3rd party seller link is not allowed as well, because we do not recommend users to purchase Xiaomi products via 3rd party seller. There is alwaysachance of gettingafake product from them.Any type of advertising, job offering and income generation in threads, replies, PM will be deleted and the user will be warned one time, second time he/she will be banned for minimum 14 days!The rules and guidelines are subject to modification whenever necessary.For any problem or information please tag mentioned Super Moderator or Moderator, we will try to solve your problem. Super Moderator Ko Hset Gyi ModeratorThan DanaမွနျမာSub-Forum မှကွိုဆိုပါတယျ။Mi Community အသုံးပွုသူမြားအနဖွေငျ့အခငျြးခငျြး ပြျောပြျောရှငျရှငျ ဖွငျ့ လေးစားသမှုပွုပေးကွပါ။ ပြျောရှငျစရာကောငျးသောMi Community Myanmar Sub-Forum တဈခုဖွဈလာဖို့အတှကျ အားလုံးလိုကျနာဖို့လိုအပျသောစညျးမဉျြးစညျးကမျးအခြို့နှငျ့ လမျးညှနျခကျြအခြို့ဖွဈပါတယျ။စညျးမဉျြးစညျးကမျးမြားပိုဈ့မတငျခငျ အရငျရှာပါပထမဆုံးမွနျမာ Sub-Forum မှာရှိတဲ့ထိပျဆုံးမှာ ပွထားသညျ့ပိုဈ့မြားကို အရငျဖတျစလေိုပါတယျ။ အကွောငျးအရာထပျနသေော ပိုဈ့မြား၊မေးခှနျမြားကို ရှောငျကဉျြရနျ မိမိ ပိုဈ့အဟောငျးကို Edit ပွုလုပျနိုငျပါတယျ။ ထပျနသေောအကွောငျးအရာတူပိုဈ့မြား ၊ မေးခှနျးမြားကို ခဏခဏ တငျခွငျးဟာ သငျ့ကို သတိပေးခွငျး / ရကျအနညျးငယျဘမျးခွငျးမြားအပွုလုပျခံရနိုငျပါတယျ။ ပိုဈ့အသဈ၊ မေးခှနျးအသဈတဈခု မတငျမီမှာ micommunity မှာအရငျရှာစလေိုပါတယျ။ အကွောငျးအရာတူ ထပျနတေဲ့ ပိုဈ့မြား၊ မေးခှနျးမြား ထပျမံ တငျပါကထို ပိုဈ့/မေးခှနျး မြားဟာ ဖကျြ ခံရမှာဖွဈပါတယျ။အင်ျဂလိပျ/ ယူနီကုဒျ / ဇျောဂြီ ကွိုကျနှဈသကျရာ သုံးနိုငျသညျသငျ့အနဖွေငျ့Myanmar Mi Community Sub-Forum အတှငျးအင်ျဂလိပျ / ယူနီကုဒျ / ဇျောဂြီ ကွိုကျနှဈသကျရာ တဈမြိုးမြိုး သုံးနိုငျသညျ။ သတိပွုရနျမှာမွနျမာစာ (ယူနီကုဒျ /ဇျောဂြီ) ဖွငျ့ ရေးသားခွငျးကို Myanmar Sub-Forum မဟုတျသောအခွားနရောမြားတှငျ အသုံးပွုပါက သငျ့အနဖွေငျ့ သတိပေးခံရခွငျး ၊ အဘမျးခံ ရခွငျးတို့ဖွဈနိုငျပါသညျ။အဓိပ်ပါယျမရှိသညျမြားရေးသားခွငျးပိုဈ့အသဈတငျခွငျး၊Reply ပွနျခွငျးတို့အားအဓိပ်ပါယျပျေါလှငျအောငျ အကွောငျးအရာပွညျ့စုံစှာ ရေးသားရနျလိုအပျသညျ။ MiCommunity သညျ သငျ၏ခကျြဘောကျ တဈခုမဟုတျကွောငျးကို သတိပွုရနျလိုအပျသညျ။ပွငျးထနျစှာတားမွဈထားခွငျးအောကျပါအခကျြမြားကိုMi Community တှငျမပွုလုပျရနျပွငျးထနျစှာတားမွဈထားသညျ။ကွမျးတမျးသောစကားလုံးမြား/ အခငျြးခငျြးလေးစားမှုမရှိခွငျး / စညျးမဉျြးမြားအားခြိုးဖောကျခွငျးလိငျအသားပေး ဓာတျပုံမြား ၊ ဗီဒီယို ဖိုငျမြား တငျခွငျးလူမြိုးရေး၊ ဘာသာရေး၊ နိုငျငံရေး အကွောငျးမြားပိုဈ့တငျခွငျး၊ ဆှေးနှေးခွငျးအခငျြးခငျြးလေးစားမှုမရှိ ရိုငျးစိုငျးခွငျး ၊ တိုကျခိုကျခွငျး မြားပွုလုပျခွငျးမိမိအားထုတျမှုမပါဘဲ သူတဈပါး၏ ကွိုးစားအားထုတျထားသညျမြားကို ခိုးယူခွငျး ၊ Credit/Sourceမပေးဘဲဖျောပွခွငျးရောငျးခခြွငျး/ ကွငွောခွငျးMi Community အတှငျးXiaomi / Mi / Redmi / POCO အစရှိသောပစ်စညျးမြားအပါအဝငျ မညျသညျ့ ဖုနျး/ပစ်စညျးမဆို တိုကျရိုကျရောငျးခခြွငျး/တဈဆငျ့ပွနျလညျရောငျးခခြွငျးမြား ပွုလုပျခှငျ့မရှိပါ။ထိုသို့ပွုလုပျမိပါကပထမအကွိမျ Message ပို့သတိပေးခွငျးခံရမညျဖွဈပီး နောကျတဈကွိမျ ထပျမံကွူးလှနျပါကအနညျးဆုံး ၁၄ ရကျ အဘမျး ခံရပါမညျ။အထကျပါစညျးမဉျြးစညျးကမျးမြားအား လိုအပျခကျြ အရ အခြိနျမရှေး ထပျမံဖွညျ့စှကျ ပွုပွငျ မညျ။ သငျ၏အရေးကွီးသောပွဿနာ မေးခှနျးမြား တှငျ Super Moderator (or) Moderator မြားအား မနျးရှငျး ချေါနိုငျသညျ။ ကြှနျုပျတို့မှသငျ့ပွဿနာမြားအား အကောငျးဆုံးဖွရှေငျးပေးနိုငျရနျ ကွိုးစားပေးပါမညျ။Super ModeratorKo Hset GyiModeratorThan Danaမြန်မာSub-Forum မှကြိုဆိုပါတယ်။Mi Community အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်အချင်းချင်း ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ဖြင့် လေးစားသမှုပြုပေးကြပါ။ ပျော်ရွှင်စရာကောင်းသောMi Community Myanmar Sub-Forum တစ်ခုဖြစ်လာဖို့အတွက် အားလုံးလိုက်နာဖို့လိုအပ်သောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအချို့နှင့် လမ်းညွှန်ချက်အချို့ဖြစ်ပါတယ်။စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများပိုစ့်မတင်ခင် အရင်ရှာပါပထမဆုံးမြန်မာ Sub-Forum မှာရှိတဲ့ထိပ်ဆုံးမှာ ပြထားသည့်ပိုစ့်များကို အရင်ဖတ်စေလိုပါတယ်။ အကြောင်းအရာထပ်နေသော ပိုစ့်များ၊မေးခွန်များကို ရှောင်ကျဉ်ရန် မိမိ ပိုစ့်အဟောင်းကို Edit ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ထပ်နေသောအကြောင်းအရာတူပိုစ့်များ ၊ မေးခွန်းများကို ခဏခဏ တင်ခြင်းဟာ သင့်ကို သတိပေးခြင်း / ရက်အနည်းငယ်ဘမ်းခြင်းများအပြုလုပ်ခံရနိုင်ပါတယ်။ ပိုစ့်အသစ်၊ မေးခွန်းအသစ်တစ်ခု မတင်မီမှာ micommunity မှာအရင်ရှာစေလိုပါတယ်။ အကြောင်းအရာတူ ထပ်နေတဲ့ ပိုစ့်များ၊ မေးခွန်းများ ထပ်မံ တင်ပါကထို ပိုစ့်/မေးခွန်း များဟာ ဖျက် ခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်/ ယူနီကုဒ် / ဇော်ဂျီ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ သုံးနိုင်သည်သင့်အနေဖြင့်Myanmar Mi Community Sub-Forum အတွင်းအင်္ဂလိပ် / ယူနီကုဒ် / ဇော်ဂျီ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ တစ်မျိုးမျိုး သုံးနိုင်သည်။ သတိပြုရန်မှာမြန်မာစာ (ယူနီကုဒ် /ဇော်ဂျီ) ဖြင့် ရေးသားခြင်းကို Myanmar Sub-Forum မဟုတ်သောအခြားနေရာများတွင် အသုံးပြုပါက သင့်အနေဖြင့် သတိပေးခံရခြင်း ၊ အဘမ်းခံ ရခြင်းတို့ဖြစ်နိုင်ပါသည်။အဓိပ္ပါယ်မရှိသည်များရေးသားခြင်းပိုစ့်အသစ်တင်ခြင်း၊Reply ပြန်ခြင်းတို့အားအဓိပ္ပါယ်ပေါ်လွင်အောင် အကြောင်းအရာပြည့်စုံစွာ ရေးသားရန်လိုအပ်သည်။ MiCommunity သည် သင်၏ချက်ဘောက် တစ်ခုမဟုတ်ကြောင်းကို သတိပြုရန်လိုအပ်သည်။ပြင်းထန်စွာတားမြစ်ထားခြင်းအောက်ပါအချက်များကိုMi Community တွင်မပြုလုပ်ရန်ပြင်းထန်စွာတားမြစ်ထားသည်။ကြမ်းတမ်းသောစကားလုံးများ/ အချင်းချင်းလေးစားမှုမရှိခြင်း / စည်းမျဉ်းများအားချိုးဖောက်ခြင်းလိင်အသားပေး ဓာတ်ပုံများ ၊ ဗီဒီယို ဖိုင်များ တင်ခြင်းလူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး၊ နိုင်ငံရေး အကြောင်းများပိုစ့်တင်ခြင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်းအချင်းချင်းလေးစားမှုမရှိ ရိုင်းစိုင်းခြင်း ၊ တိုက်ခိုက်ခြင်း များပြုလုပ်ခြင်းမိမိအားထုတ်မှုမပါဘဲ သူတစ်ပါး၏ ကြိုးစားအားထုတ်ထားသည်များကို ခိုးယူခြင်း ၊ Credit/Sourceမပေးဘဲဖော်ပြခြင်းရောင်းချခြင်း/ ကြေငြာခြင်းMi Community အတွင်းXiaomi / Mi / Redmi / POCO အစရှိသောပစ္စည်းများအပါအဝင် မည်သည့် ဖုန်း/ပစ္စည်းမဆို တိုက်ရိုက်ရောင်းချခြင်း/တစ်ဆင့်ပြန်လည်ရောင်းချခြင်းများ ပြုလုပ်ခွင့်မရှိပါ။ထိုသို့ပြုလုပ်မိပါကပထမအကြိမ် Message ပို့သတိပေးခြင်းခံရမည်ဖြစ်ပီး နောက်တစ်ကြိမ် ထပ်မံကြူးလွန်ပါကအနည်းဆုံး ၁၄ ရက် အဘမ်း ခံရပါမည်။အထက်ပါစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအား လိုအပ်ချက် အရ အချိန်မရွေး ထပ်မံဖြည့်စွက် ပြုပြင် မည်။သင်၏အရေးကြီးသောပြဿနာ မေးခွန်းများ တွင် Super Moderator (or) Moderator များအား မန်းရှင်း ခေါ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့မှသင့်ပြဿနာများအား အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းပေးနိုင်ရန် ကြိုးစားပေးပါမည်။Super ModeratorKo Hset GyiModeratorThan DanaDisclaimer: Mi Community Myanmar Management Staff is not responsible if you don't read the rules and don't follow the rules. If your thread or post gets deleted and if you get any warnings or ban, then only you will responsible for that. Don't ask for unnecessary questions in PM, and don't fill unnecessary complaints because all the rules are stated clearly. Please read the rules beforehand. Thank You!Regards ,Mi Community Myanmar Management Team